Freshcaller: Nidaamka Taleefanka Farsamaysan ee Kooxaha Iibinta Fog | Martech Zone
In kasta oo kooxaha iibka fog ay caan ku noqdeen shirkadaha, masiibada iyo xiritaanka ayaa loo wareejiyay kooxda iibinta casriga si ay uga shaqeeyaan guriga. In kasta oo dhamaadka qufulku uu u wareejin karo qaar ka mid ah kooxaha si ay ugu laabtaan xafiiska, ma hubo in shirkadaha badankood ay u baahan doonaan dhaqaaqaas Kharashka aan loo baahnayn ee xafiiska iibka ee magaalada hoose si fudud dib uguma laaban doono maalgashi ay samayn jirtay… gaar ahaan hadda oo shirkaduhu ku qanacsan yihiin shaqaalaha ka shaqeeya guryaha.
In kasta oo hal dhinac cirka isku shareeray uu ahaa wada-hadalka fiidiyowga, haddana daruuriga kale ee kooxaha iibka fog waxay ahaayeen nidaamyo maamul wicitaan. Kooxaha iibka fog waxay u baahan yihiin astaamo wicitaano yar markay guriga ka shaqeynayaan:
Wac Masaan - Awoodda lagu sameyn karo wicitaanno dibedda ah oo wata aqoonsi wicitaan oo matalaya shirkadda, ma ahan lambarka gaarka ah ee wakiilka iibka.
La-socodka Wicitaanka - Awoodda tababarayaasha iibka inay dhagaystaan ​​wicitaanada dibadda iyo inay hagitaan siiyaan wakiiladooda iibka si ay u horumariyaan kulamadooda iibka.
Wicitaanka Wicitaanka - Awoodda hoggaanka iibka si ay ula socdaan mugga wicitaanka dibadda si loo hubiyo in wakiillada iibku ay wax soo saar leeyihiin.
Freshcaller: Nidaamka taleefanka ee kooxaha iibka
Freshcaller waa nidaam taleefan dalwad ah oo loo dhisay kooxaha iibka. Ma aha oo kaliya inay leedahay dhammaan astaamaha asaasiga ah ee kor ku xusan, laakiin sidoo kale waa nidaam taleefan adag oo ku habboon kooxaha iibka fog qaadanaya gudaha isla markaana sameeya wicitaanno dibedda ah. Freshcaller dhammaantoodna waxaa laga maamuli karaa taleefannada gacanta ee iibka ah.
Freshcaller wuxuu leeyahay astaamo dheeri ah oo u horseedi doona xitaa waxtar badan kooxaha iibkaaga:
Lambarka Rarista iyo La Wareegista - U dir lambarkaaga hadda Freshcaller ama ku dar lambarada maxalliga ah, kuwa caalamiga ah, ee bilaashka ah, ama kuwa aan micnaha lahayn ee ganacsigaaga.
Wac Masaan - U yeer wicitaanadaada taabasho shaqsiyeed adiga oo ku qarinaya lambarkaaga ganacsi nambarkaaga gaarka ah.
Tirooyin badan - Waxaad ku siisaa wakiiladdaaga lambarrada waddan kasta oo ay bartilmaameedsanayaan si ay ugu kalsoonaan karaan wicitaanadooda.
Diidmada Codka - Kudar fariin horay loo duubay adigoo gujinaya batoonka sanduuqa farriinta ee rajada aan ka soo qeyb geli karin wicitaanka.
Korjoogteynta & boobka - Dhageyso wadahadal socda kuna soo biir wicitaanka si aad gacan ugu fidiso gacan-qabsi ku saabsan wakiilka la halgamaya in la xiro heshiiska.
Wac Tagging - Ka dalbo wakiilladaada iibka inay ku calaamadeeyaan wicitaan kasta oo leh heerka wicitaankaas si aad ula socon karto waxtarka wicitaanka iyo marxaladda rajada.
App gacanta - Sii wakiilkaaga awood u leh inay wax ka iibiyaan goob kasta oo shaqadooda ku qabato, iyaga oo wata barnaamijka Freshcaller ee ay sameyn karaan oo ay wici karaan oo ay ku abuuri karaan hoggaan socodka.
Waxqabadyada Isdhexgalka - Abuur hoggaamiye ama ku lifaaq wicitaan ku jira hoggaan jira Isdhexgalka Freshcaller-Freshsales. Hubso in wicitaan kastaa ka dhex jiro koontadaada CRM.
Wicitaanada Wadada ee loo diro Codka - Shaqsiyeelo salaantaada codka, marinka saacadaha dambe ee wicitaanka, ama otomatiga ujiidaya fariimaha codka.
Samee Saacado Ganacsi oo Kala Jaban - Ku shaqee xarunta wicitaankaaga oo ku saleysan waqtiyo iyo maalmo cayiman oo ku habboon ganacsigaaga. Had iyo jeer waad hagaajin kartaa markaad miisaamayso.
Qeybaha Wicitaanada oo leh Heerarka Heerka Badan ee IVR - Diyaarso nidaam PBX ah oo si buuxda u jajabnaan kara oo leh awoodo aad si fudud ugu wici karto wicitaannada wakiilladaada ama kooxahaaga, oo ay weheliso awoodda lagu daro ikhtiyaarrada is-adeegsiga.
Isukeenil Khadadka Wadaagga ah - La wadaag hal lambar taleefan dhammaan isticmaaleyaasha, kana jawaab wicitaannada taleefannada soo gala taleefan kasta, meel kasta.
Abuur Ciidaha iyo Xeerarka Marinka - Kudar liis gaar ah oo ciidaha ah lambar taleefan kasta oo laga iibsado gudaha koontadaada 'Freshcaller' si loogu qorsheeyo wicitaannada soo galaya inta lagu jiro fasaxyadaada. Abuur oo maamul qorshooyinka dariiqa gaarka ah si loo maareeyo wicitaanada soo gala inta lagu jiro fasaxyada.
Samee Salaan Gaar ah - Isticmaal fursaddan si aad u habeysid qabashada, safka, ama muusikada waqtiga sugida si aad u muujiso alaabooyin, adeegyo, ama ogeysiisyo cusub.
Ku Kordhi Jawaabaha Safafka Sug - Freshcaller wuxuu si otomaatig ah u ogeysiinayaa dadka soo wacaya inay ogaadaan booska ay kaga jiraan safka inta ay sugayaan markooda si ay ula hadlaan kooxdaada taageerada.
Jooji Wicitaanada Spam-ka - Si otomatig ah uga hortag wicitaanada spam isla markaana ka jooji wicitaanada noocaas ah qaar ka mid ah gobollada isku dayaya inay la xiriiraan meheraddaada.
Jawaabaha Wicitaanada Taleefannada SIP - Si toos ah uga hel wicitaannada taleefankaaga soo socda qalabkaaga SIP adigoo weli awood u leh inaad u isticmaasho shaashadda 'Freshcaller dashboard' wareejinta, qoraalada, iwm.
Ka leexo wicitaanada leh Voicebots - Ku xooji meheraddaada inay ku siiso himilooyinkaaga khibrad xiiso leh oo jawaabo deg-deg ah u leh welwelka ay qabaan xitaa wakiil la'aan.
Automate Qaybinta Wicitaankaaga - Ku farxi rajadaada jawaabaha degdegga ah adoo wacaya wicitaannada saxda ah.
Soo Dejiso Raadadkaaga - Haddii aad liis garayn ku hayso, waad wada wada gali kartaa hal mar halkii aad ka samayn lahayd xidhiidh kasta oo gooni ah sidaasna wakhtigaaga ku badbaadin lahayd.
Maareynta Safka Wicitaanka Wax ku oolka ah - U samee safafka wicitaanka si aad u qaabisho dadka soo wacaya si habsami leh, u qaybi culeyska wicitaankaaga si siman, isla markaana u samee xeerar wadooyin safka ku saleysan.
Automate Wicitaankaaga Wacitaanka - Abuur xeerar wadooyin caadiya oo ku saleysan soo gelinta nidaamyada dhinac saddexaad sida CRM ama Helpdesk.
Isku day Freshcaller
Shaacinta: Waxaan xiriir la leenahay Freshcaller waxayna isticmaalayaan iskuxirayaashooda.
Tags: waji duubashadacusubwicitaanada iibka ahwicitaanada iibka dibeddapbxiibka fogwicitaanada fogshaqada fogiibinta wac barnaamijka moobilkaiibinta tagging taggingwicitaanada iibkanidaamka telefoonka dalwaddiicodka codka